'आखिर जीवन घटनाहरुको लिपिवद्ध सिलसिला न रहेछ खुइया…… ' निश्वास छाड्दै बर्बराई ऊ । जीवन भोगाइका २५ औं बसन्तसम्म उसले यति लामो उच्छवास छाडेकी थिइन -उसको उसले उसलाई नकार्दासम्म पनि । मध्यरात मै अचाक्लि मुटु दुखेर आयो । भित्रैबाट कम्पन छुटेर आयो । सहिनसक्नु भएर फुत्त निस्किई ऊ असनको साधुँरो गल्लि हुँदै चूपचाप चूपचाप । <?xml:namespace prefix = o ns = "" />
लर्वराएका पाइला जमलको आकाशे पूलमा पुगेर टक्क अडिए । घण्टाघरको घडिले रातको दुई बजेको संकेत टङटङ बजेर दिलायो । ऊ उभिइरही रानीपोखरीमा आँखा गाडेर । गाडिहरु फाट्टफुट्ट चलिरहेकै थिए । रात्रिजीवन मन पराउनेहरुको झुण्ड हा हा……… हु हु………। मा मस्त नै देखिन्थे । ऊ एकाकार रानिपोखरीसँगै । मानौं त्यो उसको ड्युटि हो । जुनेली रात जूनको उज्यालोमा पानि धमिलो थियो कि सङ्लो खुट्ट्याउन गाह्रॊ थियो तर सुन्दर भने पक्कै देखिएको थियो । उसलाई लाग्यो छेउछाउका फूल शीतको तप्पतप्पसँगै हाँस्दैैछन् । तर क्षणभरमै सोची त्यो पानि नभएर आँशुको पोखरी हो अनि यी फूल सुकसुकाउदैं पो छन् पूरा परिवेश रोएको छ उसगैं । वेचैनीले सररररर…… पूलको वल्लोछेउ छेउबाट पल्लोछेउ/पल्लोछेउबाट वल्लोछेउ हुत्याइरह्यो/हुत्याइरह्यो ।
उसले आफैंभित्र महशुस गरी आफू पागल भएको कुरालाई । लाग्यो पागल हुनु रमाइलै रहेछ । सानोछँदा घरका कोठा चौका त के के ट्वाइलेट जान समेत आमा-बालाई गुहार्ने 'म्हेन्दो' बहादुर पो भई …॥ 'तँ बहादुर भइस् म्हेन्दो' ऊ आफैंसँग खित्खिताई । तातो रापको आभासले आफैंलाई चिमोटी वरिपरि २/३ जना हात सेकाउदैं रहेछन् । यादै रहेन कत्तिवेला झिक्राझिक्री र फोहोर बटुलेर आगो बालिसकिछ उसले ।
'सगुन ! म तिमी विना बाँच्न सक्दिन यार ।'
'ह्या झुर कुरा नगर न ।'
'प्रमिस यार ……॥विलिभ मि ।' लर्वरिएको आवाजमा एकजोडी आगोसँगै बल्ल पो लागे । उसको हाँसो उसैलाई उछिनेर जोडजोडले पोखिए हा हा हा ………………।
'साली वौलाही हाँस्न पो थाली ……॥' साच्चै बौलाएछु कि क्या हो । कटक्क मन कुँडियो एकसाथ अतितका वेदनाले भत्भती पोल्न पनि ।
'म्हेन्दो ! म तिम्लाई असाध्यै मन पराउछु । खूव माया माया गर्छु ।'
'होला नि खुव'
'नपत्याए के गरुँ त ? छाती चिरेर देखाउन नसकिने रहेछ ………।' निन्हाउरिदैं जगत बोलेथ्यो ।
उसका चोर हेराइमा जगतका आँशु टल्बलिइरहेका नजर परेथे ।
केही भन्न नसकेर अघिअघि हिडिथी ऊ ।
'तिम्लाई थाहा छ नी म्हेन्दो …………।'
धारापधेँरा गाँउबेशी गर्दा उसले सधैं यस्तै सुन्थी । विस्तारै उसलाई उससँगको सामिप्यता मीठो लाग्न थालेथ्यो ।
उसकी लाहुरेनी आमाले सम्झाएकी थिई शहरीया र घरानीयाँहरु बेइमानी हुन्छन् रे । जगत त आफू जस्तै न थियो । त्यही गाउँठाउँको आफूजस्तै निम्नवर्गको । सानो कुरा जातै नमिल्या त हो । आफू तामाङ्गकी छोरी ऊ क्षेत्रीको छोरा । हट्टाकट्टा छ, बहादुर छ, मनमा द्धेष छैन …। यति कुरामा उसको प्रेम कसरी लत्याउनु मन भरिएर आयो । आँखा चिम्लेर विश्वास गरिदिई उसले जगत्लाई । सावा अक्षर मात्र चिन्न पाई उसले, उसको गाउँमा त्यो भन्दा बेशी पढाइ भए पो जगत पनि ऊ जस्तै । बुढासुब्बा त उसले देखिन । तर बाबुको पल्टने गफमा धेरैपटक सुनेकीले मेलापात पानिपँधेराको बाटोमा पर्ने रुखरुख पातपातमा निस्फिक्री लेखिदिई 'म्हेन्दो+जगत' /'जगत+म्हेन्दो' । प्रेमको पालुवा झाङ्गिदै थियो आफैंलाई बिर्साउने जंगल बनेर ।
झरी परेको विहान ढुङ्गेधारासँगै कलकल बग्दै बोलिथी ऊ 'जगत मेरो हात माग्न कहिले आउँछौ ?'
'तिम्रो लाहुरे बाको पेन्सनले नक्कल पार्न पुगेकै छ क्यार अहिले के हतार ?' हावामा उडाएथ्यो उसले ।
'मलाई त पुगेकै छ तर…तर……। तिम्री छोरीलाई त आफ्नै बाबुको कमाइ खानुपरेन ?' लजाउदैं अड्कदै कानैमा गएर साउती मारिथी उसले ।
'हँ………।' करेन्ट लागे झैं तीनहात पर हुत्तिएथ्यो उसको प्रेमी ।
'के भयो जगत ?' गोडाको बूढीऔंला हिलोमा गाड्दै याचनापूर्वक बोलिथी ऊ ।
कालोनीलो अनुहार लगाएर हतासिदैं चिच्याएथ्यो ऊ 'के भनेकी म्हेन्दो तैले ? यस्तो कसरी हुन्छ ?'
'लाहुरे कै छोरी भएपनि तँ भोटिनी होस् म काजी खलकको………।' सधैंको प्रेमिल सम्बोधन भोटिनी शब्दमा घृणाको पराकाष्ठा झल्किएथ्यो ।
'फेरी के प्रमाण यो बच्चा मेरै हो भन्ने ' धैर्यताको बाँध छुट्दा दुई थप्पड लगाएर खुइखुइ गागि्र बोकेर उक्लिइथी ऊ ।
आफैंदेखी खूव रिस उठेथ्यो उसलाई । पहाड थर्किने गरी रुन मन लागेथ्यो । मुटु नै झिके झैं निस्सासिएकी थिई । एकमन त लागेथ्यो बाबुको कोठामा झुन्ड्याइराखेको बन्दुक ल्याएर मारिदिऊँ जगतेलाई अनि मरिदिऊँ आफैं पनि ।
'तँ त बहादुर सिपाहीको छोरी होस् तैले हरेश खानु तेरो बाबुको पराजय हो । त्यो प्रेमीजसलाई आफ्नो पुरुषत्वमाथि विश्वास छैन त्यस्ता नामर्दलाई के मार्नु' फेरी आफैंले आफैंलाइ ढाडस दिइथी उसले । बाबुआमाको एक्ली छोरी ऊ बूढा बा र रोगी आमालाई छाडेर हिड्ने कुरा सम्झँदैमा पनि मनभित्र सेती भासिएथ्यो । आँखिझ्याल छेउमा बसेर चामल केलाउदै गरेकी आमा अनि फलैंचामा बसेर हुक्का तान्दै गरेका बाबुको अनुहार धित मरुन्जेल हेरेर जीवनसँग जीउने सम्झौता गरिथी उसले । सम्झौता र भोगाइको लामबद्ध खाल्टोमा भाँसिदै भासिदैं यही असनको गल्लिमा लटपटिएथी ऊ । यहाँ आएर
उसले के गरी र के चाहिँ गरिन ऊ मात्र जान्दछे । भगवान्प्रतिको आस्था त पहिल्यै छुटेथ्यो हुँदा हुन् त ती पनि जान्दा हुन् ।
काखे छोरीका प्रश्नसूचक आँखाहरुको एकटक हेराइसँगै उसका पनि आँखा भरिएर आउँथे । चाउरिएका बाबुआमाको धमिलो तस्बिरले धरधरी रुवाउँथ्यो । कहिलेकाहिँ दौडेरै जाउँ कि जस्तो पनि लाग्यो । तँ चण्डाल्नीले गर्दा मेरो यो हालत भयो' भनेर काखे छोरीलाई लुछौं झै पनि लाग्थ्यो तर त्यही बच्ची नै त उसको जीवन थिई । आफैंभित्र बौलाइसकेर ऊ आफैलाई सराप्थी । 'खूब फूल झैं भनेर म्हेन्दो नाम राखेका…थुइक्क तिमीहरु' बाबुआमाको उपहास गर्नसम्म गर्थी । जे होस् ऊ बाँचिरहेकै थिई ।
हिजैमात्र भूई पुछ्दापुछ्दै पछारिइथी ऊ । दैवको इजलासले अर्को सजायँ सुनाइदियो ।
डाक्टर-घरवेटी दिदी/घरवेटी दिदी-डाक्टर कानमै दोहरी खेल्न लागे ।
'बैनी ! तिम्रो दुइटै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको छ …………॥'
'पीर नगर् कान्छी ! तँ मलाई सन्तान दे म तँलाई जीवन दिन्छु ।' निसन्तान घरवेटी दिदीको क्रन्दन हो की मोलमोलाइ विरोधाभाषवीच बजिरहे पीडा दुःख अनि मृत्युका साइरन ।
तर्कनैतर्कनामा लोलाइछ ऊ आफूमाथि कुचीकारको कुचो परेपछि व्युझिई ।
'ओहो ! उज्यालो भैसकेछ ।' धोतीको फेर मिलाउदैं दौडिई ऊ । छोरी निद्रामै थिई । छोरीको निर्दोष अनुहारसँग सापट मुस्कान मुस्कुराइदिई । आँखामा एकसाथ गाँउघर आमाबाबु र त्यो निर्मोहीसमेत नाच्न आइपुग्यो । उसले यसपटक कसैसँग गुनासो गरिन कसैलाई गाली गरिन बरु छोरीमाथी चुम्बनको बर्षा गरिरही गरिरही । सन्तुष्टिको एक शूक्क हाँसो हाँस्दै छोरी च्यापेर दौडिई ।
केहीबेर मै घरवेटी दिदीका रसिला स्वरहरु बजिरहें । रौनक पोखियो घरभरी ।
'कान्छी ……तैले हामी तीनैजनाको जीवन रक्षा गरिस् । धन्दा नमान् साहुजीले तेरो उपचार गराउनेछन् ।' केके भन्दैथिइन् दिदी सुनिन उसले ।
गला दवियो । जिब्रो लटपटियो । ओठ थर्थराए । जीउने अभिनय वा जीवन ? अनिर्णयको पहिरो झर्दै गर्दा सधैं पर-निर्णयमा घिसारिँदै आएकी म्हेन्दोले यसपटक आत्मनिर्णय गरी । बन्द आँखा र स्थिर ढुकढुकीको अन्तिम फैसला/स्पष्ट संकेत मुटुसँग जीवनको सम्झौता असम्भव ……………………।
ajhai bujne prayas gardai chhu :)
कथा एकदम ससक्त र  मर्मस्पर्सी छ बिध्या जी |